Kulmiye oo soo Gabagabeeyay Ololihiisii
Xisbiga Kulmiye ayaa soo gaba gabeeyay dhulatuskoodii olalaha doorashada, iyaga oo isu soo baxyo ku qabtay guud ahaan Somaliland.
Ololaha doorashada Somaliland ayaa ku jira maalmihiisii u dambeeyay waxaana maanta oo Salaasa ahayd isu-soo baxoodii u dambeeyay qabsaday taageerayaasha Xisbiga Kulmiye oo fagaarayaasha magaalooyinka Somaliland ku qabsaday dhoolatsiyo.
Guddoomiyaha xisbiga ahna murashaxa madaxnimada Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa kala hadlay dadka fagaaraha , sidoo kale mas’uuliyiin kale oo ka mid ah madaxda Xisbiga aya taageerayaasha kula hadlay gobolada iyo degmooyinka Somaliland.
Warbixin ku saabsan arrintaasi kala soco qaybta hoose ee boggan.Ololaha doorashada Somaliland ayaa ku jira maalmihiisii u dambeeyay waxaana maanta oo Salaasa ahayd isu-soo baxoodii u dambeeyay qabsaday taageerayaasha Xisbiga Kulmiye oo fagaarayaasha magaalooyinka Somaliland ku qabsaday dhoolatsiyo.
Warbixin ku saabsan arrintaasi kala soco qaybta hoose ee boggan.